Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ozone oyi akwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Na iche oyi akwa nke ikuku enwere oyi akwa nke ozone ya bu ihe kachasi elu na uwa dum. Nke a bụ ihe akpọrọ oyi akwa ozone. Mpaghara a dị na stratosphere ihe dịka 60 km karịa ọkwa oke osimiri ọ nwere mmetụta dị mkpa maka ndụ na mbara ala.
Na nsị nke ụfọdụ gas na-emerụ ahụ na mbara igwe site na ụmụ mmadụ, akwa a nwere ihe dị nro nke butere ọrụ ya maka ịdị ndụ na mbara ụwa egwu. Agbanyeghị, taa ọ dị ka ọ na-agbake. Chọrọ ịma ihe ọrụ ozone nwere na etu o si dị ụmụ mmadụ mkpa?
2 Ọrụ nke oyi akwa ozone
3 Chemical njirimara nke ozone
4 Kedu esi ewepụta ozone na stratosphere?
5 Na ozone oyi akwa
6 Ozone oyi akwa mbibi
Iji malite ịmata ihe ọrụ ozone nwere, anyị ga-ebu ụzọ mara njirimara gas nke mejupụtara ya: ozone gas. Usoro ọgwụ ya bụ O3, ọ bụkwa ụdị oxygen, nke ahụ bụ, otu n'ime ọnọdụ nke enwere ike ịchọta ya na okike.
Ozone bụ gas nke na-emebi n'ime ikuku oxygen nkịtị na nrụgide na nrụgide nkịtị. Ọ na-enyekwa gị ísì ísì na agba ya dị nro. Ọ bụrụ na ozone dị n’elu ụwa ọ ga-abụ ihe na-egbu egbu nye osisi na anụmanụ. Agbanyeghị, ọ dị n'ụzọ ebumpụta ụwa n'ime ozone yana na enweghị oke ikuku nke gas a na stratosphere anyị agaghị enwe ike ịpụ n'èzí.
Ozone bụ ihe nchebe dị mkpa nke ndụ n’elu ụwa. Nke a bụ n'ihi ọrụ ya dị ka nzacha nzacha megide radieshon ultraviolet sitere na Sun. Ozone bụ ọrụ maka ịmịkọrọ ụzarị Anyanwụ nke dị na Sun ntụgharị n'etiti 280 na 320 nm.
Chemical njirimara nke ozone
Ozone bụ gas nwere ike ịchọta na ebili mmiri eletrik na nso nnukwu voltaji ma ọ bụ ngwa na-enwu ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, na ndị na-agwakọta, mgbe a na-emepụta ọkụ site na kọntaktị nke brushes, a na-emepụta ozone. Enwere ike ịmata ya site n ’isi.
Igwe a nwere ike ịgbakọta ma pụta dị ka mmiri mmiri na-achaghị acha anụnụ anụnụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ ga-akpụ akpụ ọ ga-eweta agba ojii-acha odo odo. Na steeti abụọ a, ọ bụ ihe na-agbawa agbawa nyere nnukwu ike ikuku.
Mgbe ozone na-abanye n'ime chlorine, ọ nwere ike ịgbanye ọtụtụ ọla na, ọ bụ ezie na njupụta ya pere mpe na elu ụwa (naanị ihe dị ka pp 20), ọ nwere ike ịgbanye ọla.
Ọ dị arọ ma na-arụsi ọrụ ike karịa oxygen. Ọ dịkwa oxidizing karịa, ọ bụ ya mere eji ya dị ka disinfectant na germicide, n'ihi ọxịdashọn nke nje bacteria na mmetụta a. Ejiri ya iji mee ka mmiri dị ọcha, bibie ihe ndị dị ndụ, ma ọ bụ ikuku dị n'ụlọ ọgwụ, ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, wdg.
Kedu esi ewepụta ozone na stratosphere?
A na-emepụta Ozone tumadi mgbe a na-etinye irighiri ikuku oxygen n'ike nke ike. Mgbe nke a mere, ụmụ irighiri ihe ndị a na-aghọ ihe na-enweghị ikuku oxygen. Ikuku a adịchaghị akwụsi ike, yabụ mgbe ọ hụrụ ozigbo ikuku oxygen ọzọ, ọ na - eketa ozone. Mmeghachi omume a na-adị kwa sekọnd abụọ ma ọ bụ karịa.
N'okwu a, ike ume nke na-achịkwa ikuku oxygen bụ ultraviolet radieshon si anyanwụ. Ultraviolet radieshon bụ ihe dissociates molekụla oxygen n'ime atọm oxygen. Mgbe akwara atomik na molekul molekul na-ezukọ ma mepụta ozone, ultraviolet radiation n'onwe ya na-ebibi ya n'aka nke ya.
A na-aghọtahie okwu a "ozone oyi akwa" n'onwe ya. Nke ahụ bụ, echiche bụ na otu elu na stratosphere enwere nnukwu ozone nke na-ekpuchi ma na-echebe ụwa. More ma ọ bụ obere ọ na-anọchi anya dị ka a ga-asị na igwe kpuchiri igwe ojii.
Otú ọ dị, nke a abụghị eziokwu. Eziokwu bụ na ozone adịghị etinye na stratum, ma ọ bụ na ọ dị na oke dị elu, kama ọ bụ obere ụkọ nke etinyere na ikuku na na, na mgbakwunye, na-egosi site na ala ruo n'ofe stratosphere. Ihe anyị na-akpọ "ozone oyi akwa" bụ mpaghara stratosphere ebe ịta ahụhụ nke ụmụ irighiri ozone dịtụ elu (ihe ole na ole kwa nde) na ihe karịrị ogo ndị ọzọ nke ozone n'elu. Ma nchịkọta ozone ma e jiri ya tụnyere nke gas ndị ọzọ dị na mbara igwe dị ka nitrogen, bụ obere ihe.
Ọ bụrụ na oyi akwa ozone apụọ, ụzarị anyanwụ ultraviolet ga-ekpuchi elu ụwa ozugbo na-enweghị ụdị nza ọ bụla ma mee ka a kpochapu ala, na-ebibi ndụ ụwa niile.
Ntinye nke ozone gas na ozone oyi akwa bu nke ihe dị ka akụkụ 10 kwa nde. Oghere nke ozone stratospheric dị iche na elu, mana ọ karịrị otu narị puku nke ikuku ebe achọtara ya. Ozone bụ ụkọ gasị ụkọ nke na, ọ bụrụ na nwa oge anyị ga-ekewapụ ya na ikuku ndị ọzọ ma dọta ya n'ala, ọ ga-abụ naanị 3mm.
Ngwurugwu ozone malitere ịka njọ na afọ 70, mgbe a hụrụ ihe na-emerụ ahụ ikuku gas nitide nwere na ya. Igwe ndị a na-achụpụ gas ndị a.
Mmiri nitrous na-eme ka ozone na-akpata nitric oxide na oxygen nkịtị. Ọ bụ ezie na nke a mere, ihe emere na ozone oyi akwa dị ntakịrị. Ikuku ndị na-emebi ozone oyi akwa bụ CFCs (chlorofluorocarbons). Ikuku ndị a sitere na ojiji nke kemịkal sịntetik.
Oge izizi nke mbelata nke ozone oyibo amaara na 1977 na Antarctica. Na 1985 enwere ike ịtụ na mbibi radiation ultraviolet na-emerụ ahụ sitere na Sun abaala ugboro 10 yana ozone ozone na Antarctica jiri 40% belata. Site na ya ọ bụ mgbe ọ malitere ikwu banyere oghere ozone.
Mkpa nke oyi akwa ozone bụ ihe omimi ogologo oge. Nkọwa ndị ejikọrọ na usoro mbara igwe ma ọ bụ njirimara dị omimi nke ikuku dị ka enweghị isi ma taa o yiri ka egosipụtara na ọ bụ n'ihi mmụba nke ihe ọkụkụ freon (Chlorofluorocarbon ma ọ bụ CFC), gas eji eme ihe na ulo oru aerosol, plastik na friji na ikuku ikuku.
CFCs nwere ikuku siri ike na mbara igwe, ebe ọ bụ na ha adịghị egbu egbu ma ọ bụ na-ere ọkụ. Nke a na-enye ha ogologo ndụ, na-enye gị ohere ibibi ụmụ irighiri ozone dị n'ụzọ gị ogologo oge.
Ọ bụrụ na ebibi Ozone Layer, mmụba nke radieshon UV ga-ebute usoro nhụjuanya nke mmeghachi omume ndu dị ka mmụba nke ọrịa na-efe efe na ọrịa kansa.
N'aka nke ọzọ, imepụta ikuku gas (nke sitere na ụwa site na omume nke mmadụ) na -emepụta ihe a na-akpọ "Greenhouse mmetụta", ọ ga - ebute okpomoku zuru ụwa ọnụ na mgbanwe mpaghara na ọnọdụ okpomọkụ, nke ga - eme ka ịrị elu nke oke osimiri dị ka nsonaazụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, nke iji nwayọọ nwayọọ gbazee nnukwu igwe ice polar.
Nke a dị ka azụ nke na-ata ọdụ ya. Ọnụọgụ nke radieshon nke na-emetụta elu ụwa, nke ka ukwuu na mmetụta na okpomọkụ. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ kpatara mmụba nke griinụ na mmụba nke ụzarị ọkụ sitere na Anyanwụ na igwe mmadụ dị ka Antarctica, anyị nwere ike ịhụ na mmiri mikpuru ụwa ekpo oke ọkụ na-eme ya niile.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ozone oyi akwa dị ezigbo mkpa maka ndụ dị na mbara ala, ma ụmụ mmadụ, yana ahịhịa na anụmanụ. Idebe ozone oyi akwa n'ọnọdụ dị mma bụ maka nke a, gọọmentị ga-agarịrị na-arụ ọrụ na mmachi ikuku ikuku nke na-ebibi ozone.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ozone oyi akwa
Ezigbo ederede! Daalụ.
Becomeghọtakwu ilekọta ụwa anyị anya
Zaghachi Leslie Paidanca
ezigbo nkowa banyere ozone oyi akwa, juo kedu etu osone oyi akwa
Zaghachi NESTOR DIAZ
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na nnukwu kpakpando dara n’elu ụwa?